चियामा सकस : समस्या जहाँको त्यहीँ आखिर किन? – Nepali Janata Khabar
चियामा सकस : समस्या जहाँको त्यहीँ आखिर किन?
इलाम, २३ माघ । सूर्योदय नगरपालिकाका प्रमुख रणबहादुर राईले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा चियाका विषयमा धेरै गुनासो गर्नुभयो । उहाँले चिया उत्पादकले बोरामा खुट्टाले खाँदेर बेच्ने गरेको बताउनुभयो ।
पोखरामा रोमान्टिक बने आर्यन र उपासना हेर्नुस् (तस्वीर सहित)